Tafakatra ambony dia ambony mampanahy ny tahan’ny fampijaliana ankizy aty Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2018 5:44 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, 繁體中文, Swahili, Italiano, Português, polski, عربي, 日本語, Deutsch, Nederlands, Français
Enfants Malgaches par Yves Picq – CC-BY-SA-3.0/ zaza malagasy avy amin'i Yves Picq
[Nosoratan'i Andry R. Razafimbahoaka, mpanoratra nasaina, ity lahatsoratra ity. Navoakan'ny Global Voices taty aoriana ny lahatsoratra miaraka amin'ny fanondroana tsaratsara kokoa.]
Hatramin'ny nisian'ny fanaovan-tsonia tamin'ny taona 1991, dia nanamafy ny ezaka nataony hanatanterahana ny Fifanarahana momba ny Zon'ny Ankizy i Madagasikara. Nanomboka tamin'ny taona 2004 ka hatramin'izao dia namorona tambajotra mihoatra ny 750 manerana ny firenena ho fiarovana ny ankizy ny governemanta. Na dia eo aza ny fandrosoana amin'ny fiarovana ny zaza, dia mbola misy foana ny fampijaliana, ny herisetra, ny fanararaotana ara-nofo ary ny asa an-terivozona izay zava-misy mampalahelo eto Madagasikara izay mitranga ao mangina ao amin'ny fiainana an-tokantrano na takon'ny fijerin'ny besinimaro. Ao amin'ny tatitra iray nampanaovin'ny Fanjakana Malagasy sy ny Unicef dia fantatra fa zatovo iray ao antin'ny roa no milaza fa niharan'ny herisetra any amin'ny tontolon'ny fampianarana ary ankizy sivy ao anatin'ny folo no efa niharan'ny herisetra eo anivon'ny fianakaviany.
Tatitry ny UNICEF nanaitra:
Araka ny fangatahan'ny Governemantan'i Madagasikara dia nanao fanadihadiana momba ny herisetra atao amin'ny ankizy taty amin'ny firenena ny Unicef, ka mampatahotra ny vokatra:
89% n'ny ankizy no nilaza fa efa nampijaliana ara-batana indray andro tao an-tranony. Nefa 72% no milaza fa mahatsiaro ho voaaro izy ireo any an-trano.
Amin'ny ankapobeny, manindry ny tatitra fa matetika miorim-paka amin'ny fomban-drazana io herisetra io ary tena sarotra ny manova izany.
Heverina ho toy ny fomba fanabeazana ny herisetra na ao an-trano na any an-tsekoly
hoy ny fanazavan’i Rajae Sbihi, mpitsabo aretin-tsain'ny ankizy iray izay nandray anjara tamin'ilay fanadihadiana:
Ankizivavy malagasy sarin'i Hery Zo Rakotondramana ao amin'ny FlickR – CC BY-SA 2.0
“Singa iray hafa: ny tontolo ambanivohitra. Izany hoe ny ankizy avy any ambanivohitra no tena iharan'ny herisetra”, hoy ny fanazavan'ny mpitsabo aretin-tsain'ny ankizy. Efa ho ny 20 isanjaton'ny ankizy no tsy voasoratra anarana tamin'ny fahaterahana — indrindra ireo any amin'ny faritra lavitra — izay mampitombo ny faharefoany. Ny manampahefana sisa matetika no iray amin'ny hany fangataham-bonjy ho an'ireo ankizy iharan'ny herisetra, indrindra raha iharan'izany ao anatin'ny fianakaviana izy ireo. Mety hiteraka ratra lehibe, ratram-panahy, fikorontanan'ny fitomboana sy fihetseham-po, fitondran-tena mampidi-doza, ary fandaozana sekoly ireo herisetra ireo.
Ankoatra ny herisetra ara-batana, misy toe-javatra marobe izay manavesatra ny fivelaran'ny ankizy. Hita fa 40% -n'ireo tanora Malagasy no milaza fa niasa talohan'ny faha-18 taonany – zava-misy izay misy fiantraikany amin'ny hoavin'izy ireo izany, ary matetika izany no mitazona azy ireo amin'ny fahantrana. Amin'izany, nanoritra i Laureat Rasolofoniainarison izay Mpitantana ny Tetikasa ao amin'ny biraon'ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny Asa ao Antananarivo fa:
Milaza ny Ray aman-dReny matetika fa alefan'izy ireo miasa ny zanany raha tokony andeha any an-tsekoly satria mahantra izy ireo. Kanefa raha ny marina dia ny fampiasan'izy ireo ny zanany no mahatonga azy ireo hahantra amin'ny fanohizana ny lalana tsy ahafahan'ny fianarana sy ny fahafahana miakatra sata ara-piarahamonina mahazo faka.
Mbola marefo kokoa ny tovovavy amin'ity resaka herisetra ity. Olana ny fampanambadiana zaza tsy ampy taona, izay anisan'ny fomba amam-panaon'ny malagasy, ary mihoatra ny ampahatelon'ny zazavavy eo anelanelan'ny 15 sy 19 taona no efa manambady na manao tokantranomaso. Vitsy dia vitsy ny zazavavy mampiasa fomba fanabeazana (latsaky ny 8%), izay mampitombo ny ampahany amin'ny vohoka tsy nirina. Ary 30% amin'ireo tovovavy tsy ampy taona no efa no efa manan-janaka araka ny fampilaharana tamin'ny “World Atlas 2015″. Tarehimarika mety hiakatra hatrany amin'ny 50% any amin'ny fokontany sasany ao an-drenivohitra. Ny mampihoron-koditra indrindra, mitombo ny findrandrahana ny tovovavy atao entam-barotra aty Madagasikara, indrindra any akaikin'ny toerana misy solika sy harena ankibon'ny tany.
Fitaovana iray vaovao hiadiana tsara kokoa amin'ny herisetra
Talohan'io tatitra io dia tsy fantatra ny zon'ny ankizy taty Madagasikara. Noho izany tokony ahafahan'ny mpiantsehatra amin'ny fiarovana ny ankizy mba hahatakatra bebe kokoa izy io hisorohana tsara kokoa sy hamaliana tsara kokoa ireo toe-javatra ratsy mety hitranga. Hampiasaina ihany koa izy io hametrahana ny vato fehizoron'ny politikam-pirenena itadiavam-panafana amin'ireny herisetra ireny. Ilaina ihany koa izany ho tohan-kevitra handresen-dahatra ny mponina hiova fihetsika sy hiala amin'ny fomba fanao mahazatra, izay indraindray tena tsy mety amin'ny ankizy. Ankoatra izany dia nampiely mpiasa an-tsitrapo maherin'ny 240 manerana ny nosy ny UNICEF hanao ny asa fanohanana ara-tsaina, fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny fiarahamonina ary ny fanentanana ara-tsosialy
Farany, nametraka fiaraha-miombon'antoka ny Unicef mba hananganana ny fitsipi-pitondran-tenan'ny mpiasany rehetra sy mpiantoka asan'ny orinasa mpitrandraka madinika aty Madagasikara, sy hampitsaharana ny fanararaotana ara-pananahana ny tovovavy. Tokony hisy fiantraikany tsikelikely amin'ny fiarovana azy ireo ity fomba fiasa ity